विजय साहिको परिवार एक्कासी मिडियामा, सबै नेपाली खुशी हुने यस्तो छ सन्देश (हेर्नुहोस भिडियो) | Butwal Dainik
होमपेज / रङ्गीन मिडिया टि.भी.
काठमाण्डाैं, भदाै ३ । तीस सेकेण्डमा एक सयभन्दा बढी शब्द सम्झेर कालिकोटका १९ वर्षीय विजय शाही अहिले चर्चामा छन् । उनलाई तेजस्मरणशक्ति भएका विश्वका कीर्तिमानी मानिएको छ ।
एक मिनेटमै एक सय भन्दा बढी शब्द याद गर्न सक्ने उनको खुबीकै कारण विश्व रेकर्ड कायम गर्न सफल भएको चर्चित पत्रकार भाग्य नेउपानेले आफ्नो युट्युब च्यानलमा जनाएका छन् ।
शाहीले एक मिनेटमा अगाडि र पछाडिबाट ७० शब्द सम्झिएर भनेपछि भारतका प्रतियोगीलाई पछि पार्दै यसअघिका विश्वकीर्तिमानी भारतका सागर भुजीलाई पछि पारेका हुन् ।
यसभन्दा अगाडि स्मरणशक्तिको एउटा इमेभन्टमा झापाका अर्पण शर्माले गिनिज बुक रेकर्डमा नाम लेखाएका थिए । उनलाई समेत शाहीले उछिनेको अनलाइन समाचारहरुमा उल्लेख गर्न थालिएको छ । तर शर्माको रेकर्ड तोडेको बारेमा पुष्टि हुन सकेको छैन ।
काठमाडौंको होटल अन्नपूर्णमा एक समारोह आयोजना गरेर शाहीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको जनाइएको छ । उनले च्याम्पियन बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको उपाधि पाएका छन् ।
उनी अहिले सामाजिक सञ्जाल र अन्तरवार्ताहरुमा देखिने गरेका छन् । उनको यो अद्भुत कलाको प्रस्तुति धेरै युट्युव च्यानलहरुले दिएका छन् ।
दुर्गम गाउँमा जन्मेका शाहीले गाउँकै विद्यालयवाट प्रमाणपत्र तह पास गरेको जनाइएको छ।
रङ्गीन मिडिया टि.भी. सम्बन्धि थप